Sida loo Play YouTube FLV on Galaxy S4
> Resource > Samsung > Sida loo rogo ama YouTube FLV in Galaxy S4
Waa fikrad aad u fiican in hoorto YouTube videos in Samsung Galaxy S4 Raaxo waqti kasta iyo meel kasta. Si kastaba ha ahaatee, waxa aad ku kici doonaa badan oo gaadiidka 3G haddii aysan jirin gaadiidka WiFi, iyo video YouTube had iyo jeer xafidi doonaa sababta oo ah shabakad deganayn. Sidaas, aad si xoog leh lagula taliyey si loogu badalo soo bixi YouTube FLV videos in Galaxy S4 for loo maqli karo waqti kasta iyo meel kasta oo. No lacag dheeraad ah oo aan lahayn video naqdida.
Wondershare Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ) gabi ahaanba waa qalab kugu habboon. Ma ahan oo kaliya a video Converter awood leh, laakiin sidoo kale a video downloader weyn. Sidaa daraadeed, si aad u Galaxy S4 qaabab socon badalo kartaa videos YouTube FLV deegaanka, iyo sidoo kale ha waxaad kala soo bixi online YouTube videos for Galaxy S4. In eray keliya, YouTube in Galaxy S4 downloader iyo Converter cajiibka ah ka dhigi kartaa YouTube ku caashaqa oo ku raaxaysan video kasta YouTube on go ah.
Next, waxaan u kala horreeyaan doonaa tusaan sida loo badalo aad YouTube FLV deegaanka si ay Galaxy S4 qaabab oo ay taageerayaan sidii ay u soo bixi YouTube videos for Galaxy S4. Haddii aad soo bixi badan oo YouTube videos kombiyuutarka, kaliya raac tilmaan-Qaybta 1.
Qaybta 1aad: Sida loo badalo aad YouTube deegaanka si ay Galaxy S4
Qeybta 2: Sida loo soo bixi YouTube videos for Galaxy S4
Qaybta 1aad: Sida loo badalo soo bixi YouTube videos in Galaxy S4
Tallaabo 1: Ku dar aad files YouTube deegaanka
Hit ah button, ka dibna suuqa kala pop-up aad u horseedi doono in la helo deegaankaaga YouTube video files. Next, kaliya labo gool-riix kuwa aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan. Isla markiiba, aad arki doonaa iyaga tusay sida thumbnail ah. Dabcan, aad si toos ah u soo jiidi kartaa files ka your computer si app this halkii.
Talaabada 2: Dooro qaab socon Galaxy S4
Sida aan ognahay, inta badan YouTube videos waa qaab FLV. FLV ma aha qaab socon Galaxy S4. Sidaas darted, haddii aad rabto in aad ka ciyaari YouTube on Galaxy S4, aad leedahay si loogu badalo YouTube FLV videos in Galaxy S4 qaabab suppported hore. App Tani waa shaqo fudud aad u dhigaysa.
Hit image qaabka guddiga Qaabka wax soo saarka. Markaas, waxaad tagtaan dalka "Device" category> "Samsung"-category sub (Haddii u baahan, riix badhanka arrow hoos xitaa dhan qaybaha-hoosaadka.). Ugu dambeyntii, dooran Samsung Galaxy S IV hoos buugga. Ogsoonow in qaab filaayo in Galaxy S4 si buuxda u la jaan qaada qalabka.
Talaabada 3: Play FLV on Galaxy S4
Hadda, waxaad u baahan tahay riix "Beddelaan" button rukun-midigta hoose oo ka mid ah app this 's interface ugu weyn. Markaas, app this kaa caawin doona inaad ka shaqeeyaan inta ka dhiman.
Ugu dambeyntii, riix "Open Folder" butten qaab beddelidda kadib. Waxaad ka heli kartaa faylasha YouTube gediyay galka wax soo saarka. Just wareejiyo files si aad Galaxy S4 via cable. Hadda, waxa aad naftaada ku raaxaysan karaan meel kasta oo aad tahay iyo mar kasta oo ay tahay.
Ka dib kuu soo ordi app, waxaad uun ku dhufatey "Download" tab sare ee suuqa kala this. Marka aad dhex gashay "Download" interface, waxaad u baahan tahay riix "Ku dar URL" button dhanka bidix, ka dibna nuqul ka YouTube video url aad rabto in aad kala soo bixi furmo pop-up ah.